Banaanbax Maanta ka dhacaya Magaalada Boosaaso - Wardeeq 24 TV
Home Warar-ka Banaanbax Maanta ka dhacaya Magaalada Boosaaso
Banaanbax Maanta ka dhacaya Magaalada Boosaaso
Kadib kulan ay xalay yeesheen Ganacsatada Koonfur Galbeed ee ku nool Magaalada Boosaaso ayaa waxaa ay ku go’aamiyeen inay Maanta dhigaan banaanbax ay uga soo horjeedaan Maamulka Soomaaliland.
Banaanbaxa ayaa ujeedkiisa yahay inay kasoo horjeedaan raafka ay Ciidamada Somaliland ku sameeyeen dad kasoo jeeda Koonfur Galbeed, isla markaana ay uga soo masaafuriyeen Magaalada laas-Caanood ee Xarunta Gobolka Sool.
Qaar kamid ah dadka kulanka yeeshay ayaa waxaa ay sheegeen in Maanta ay xirayaan dhamaan Goobahooda Ganacsiga ayna muujin doonaan sida ay uga xun yihiin dhibaatada loogu geystay laas-Caanood dadka kasoo jeeda degaannada Koonfur Galbeed.
ayaa Caawa kullan ay yeesheen ku Go’aamiyey in Berri xarumahooda Ganacsi xiraan islamarkaana sameeyaan isu soobax ay uga soo horjeedaan raafka Soomaaliland ku hayso Ganacsatada isku Deegaanka ka soo jeedaan.
Wararka la helayo ayaa waxaa ay sheegayaan in dadkii Ciidamada Somaliland ka musaafuriyeen Magaalada laas-Caanood ay gaareen degmada Burtinle ee Gobolka Nugaal.
Previous articleXukumada Somalia oo sheegtay in dagaal lagu dilay Xubno katirsan Al-Shabaab
Next articleHogaanka Ahlusunna Sheekh Shaakir oo shaaciyay sababta ay dagaalka uga wadaan Galmudug
Booliska Somaliland oo howlgal ka sameeyay Magaalada laas-caanood
Ciidamada Booliska Somaaliland ayaa saacadihii la soo dhaafay waxaa ay howlgallo kala duwan ka sameeyeen Magaalada laas-Caanood ee Xarunta Gobolka Sool, halkaas oo ay...
NISA oo shaacisay in howlgal gaar ah lagu dilay Xubno ka tirsan Al-Shabaab
Ciidamada hubeysan ee Duufaan ee NISA ayaa howlgal gaar ahaa oo ka dhan ahaa Ururka Al-Shabaab waxaa ay ka fuliyeen meelo kamid ah Magaalada...
Heavy fighting erupts in Baidoa
Baidoa (sh.M.Network) reports from Baidoa town in the lower Shabelle region confirm that a heavy fighting broke out between Al shabab fighters and Somali...